७ गल्तिहरु जसले मधुमेह वा डायबिटिज लगाउँछ र ७ खाना जसले हटाउँछ, जानी राखौँ - ज्ञानविज्ञान
कृपया तलको भिडियो हेर्नुहोस् र यो जानकारी सेयर गरेर सकेसम्म धेरैसम्म पुर्याउँन हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् । हामीले दिएको जानकारीले संसारमा एक जनामात्रै पनि स्वस्थ भए अरु के चाहियो ? तपाई पनि हरेक दिन पसिना निस्किने गरि कसरत गर्नुहोस् । कसरत गर्न सक्नुहुन्न भने दिनमा कम्तिमा ४५ मिनेट दुइहात हल्लाएर हिड्नुहोस् र दिनभरीमा अलि अलि गर्दै ३ लिटर पानी पिउँनुहोस् । स्वस्थ हुनुहोस् ।
Don't Miss it उच्च रक्तचाप र हर्टअट्याकबाट बचाउँने ६ पेय पर्दाथ, नियमित सेवनले हुदैन हर्टअट्याक (भिडियो सहित)
Up Next दिमागी खेल : कति वटा पाण्डा देख्नुहुन्छ ? – २० वटा तस्विरहरु
एस्ता छन्, ब्लड क्यान्सरबारे सात तथ्य
क्यान्सर रोगको नाम सुन्नासाथ धेरैको मुटु काप्छ । क्यान्सरका विभिन्न रूप हुन्छन्, जस्तैः ब्रेस्ट क्यान्सर, ब्रेन ट्युमर, ब्लड क्यान्सर, लंग…
One thought on “७ गल्तिहरु जसले मधुमेह वा डायबिटिज लगाउँछ र ७ खाना जसले हटाउँछ, जानी राखौँ”
Dirgha kumari bc